PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-11-25 - USuthu nesibopho sokujika izinto
USuthu nesibopho sokujika izinto
Isolezwe ngeSonto - 2018-11-25 - EZEMIDLALO - NHLANHLA SITHOLE NONDUDUZO DLADLA
ABADLALI baMaZulu FC bazibekele umthwalo wokuthi ngaphambi kokuba i-Absa Premiership ivalele amaholide kaDisemba, bebe sebenezezele ngamaphuzu angu-12, kulawa amane abanawo njengamanje.
Umgadli uBongi Ntuli utshele Isolezwe ngeSonto kuthi bagabe ngokuthi abakashayelwa ekhaya eKing Zwelithini Stadium, selokhu kuqale isizini nathi bazimisele ngokuwanqumela ogodweni amaqembu abazohlangana nawo.
AmaZulu ayibambe emsilweni kwi-log ye-Absa Premiership, ngamaphuzu amane emidlalweni eyishumi. “Sihlanganile siyiqembu savumelana ngokuthi ngaphambi kokuthi sivale ngoDisemba kumele sithole amaphuzu angu-12 ,” kusho uNtuli osevalele amagoli amathathu.
“Kuyinto eyaziwayo ukuthi asikaze sishayelwe ekhaya selokhu kuqale isizini. Ngaphandle nje kwalokho sifuna ukusuka lapho sikhona, ngakho sibheke ukunqoba kuphelao,” kuqhuba uNtuli otholana kahle no-Emiliano Tade odabuka e-Argentina.
Laba bagadli bobabili sebevalele amagoli amathathu umuntu ngamunye. “Sesiyatholana kakhulu noTade, uyayiqonda indlela engidlala ngayo, nami ngiyamqonda. Ngicabanga ukuthi kusekuningi esisazokwenza.”
Ephawula uTade uthe iqophelo eliphezulu elikhonjiswa abadlali basemuva abadlala kwiPremiership kwenza angasheshi ukuwubamba umgqigqo wakhe wokushaya amagoli, ngendlela abeyenza lapho ebedlala khona eNewZealand.
“Ngihlale ngitshela abantu ukuthi iNingizimu Afrika engelinye lamazwe emhlabeni egcwele ithalente. Abadlali bakhona (Ningizimu Afrika) banekhono eliyisimanga okungenza ngithathe isikhathi sokuthi ngizinze.
“Nakuba kunjalo ungaba nazo zonke le zinto engizishoyo ngabo kodwa azanele uma ungazange uthuthukiswe ngazo usemncane ngake usakwazi ukuzenza uma usumdala. Uthi ezweni avela kulona (i-Argentina) okuningi okwenza umdlali aphelele ufundiswa khona usemncane.
Mayelana nokuthi njengoba esebonile ukuthi kudlalwa kanjani ibhola kuleli ngabe mangaki amagoli acabanga ukuthi uzowashaya ngale sizini uthe akuyona indlela asebenza ngayo ukuzibekela imigomo.
“Mina ngiwumdlali othanda ukudlalisana nabanye abadlali. Ngaso sonke isikhathi ngidlala ngokubambisana nozakwethu ngingabhekile ukuthi kufanele kube yimina oshaya amagoli.
“Igoli liyaziqhamukela ngoba sekufanele ngilishaye,” kuchaza uTade.
Ebuzwa ukuthi ngabe bengabadlali balibona kanjani ikusasa leqembu labo njengoba lihlezi emsileni ngenxa yokwemukwa amaphuzu ayisithupha uphendule wathi: “Noma kuwumbuzo okungelula ukuwuphendula kodwa sidlalela ukunqoba ukuze sibeke iqembu endaweni engcono.” NgoLwesibili AmaZulu azohlasela iHighlands Park azodlala nayo eMakhulong Stadium, eThembisa ngo.7.30 ebusuku.
Imikanje eminye yangoLwesibili yePremiership eqala ngo 7.30pm: Maritzburg United v Chippa United (Harry Gwala Stadium); Polokwane City v Cape Town City (Old Peter Mokaba Stadium); Bloemfontein Celtic v SuperSport United (Dr Molemela Stadium).